Mee Mmekọrịta Ndị Ahịa Ga-adịgide na Ọdịnaya Ogologo | Martech Zone
Otu nnyocha e mere n’oge na-adịbeghị anya gosiri na 66 percent nke omume ịzụ ahịa n'ịntanetị gụnyere ihe mmetụta uche. Ndị ahịa na-achọ ogologo oge, njikọ nke mmetụta uche nke na-agafe karịa bọtịnụ ịzụta na mgbasa ozi ezubere iche. Ha choro inwe obi uto, obi iru ala ma obu obi uto mgbe ha na ndi ahia ahia na ntanetị. Ndị ụlọ ọrụ ga-enwerịrị ike iji mmekọrịta ndị a na ndị ahịa wee nwee ntụkwasị obi na-adịte aka nke nwere mmetụta karịa otu ịzụta.
Zụrụ bọtịnụ na mgbasa ozi akwadoro na nyiwe mgbasa ozi na-elekọta ndị ahịa dabere na ozi nkeonwe, dị ka nzụta na akụkọ nchọgharị. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ na-ebugharị ọdịnaya metụtara ndị ahịa na ụzọ nuanced, ụzọ ndị a na-ebelata mkparịta ụka na azụmahịa (wdg., "Onyinye kachasị mma" dabere na ihe ị hụrụ ugbu a n'ịntanetị), ọ bụghị mmekọrịta. Ndị na-ere ahịa chọrọ ngwaọrụ ndị ka mma maka itinye aka na nkwado. Kọ akụkọ na ọdịnaya nke ahaziri ahazi nwere ikike iji nweta mmekọrịta na-adịgide adịgide site na ime ka ahụmịhe dịgasị iche.
Mmụba nke ịntanetị na nke ekwentị na-ebelata oge maka njikọ mmadụ. Onyinye azụmahịa nke ịntanetị na-egosiputa na njedebe na-enweghị ngwụcha, ugboro ugboro na saịtị ọkacha mmasị nke ndị na-eri ihe mgbe ha mere ka kuki rụọ ọrụ, na-aga n'ihu na-akpata ihe iwe. Na ihe ọ bụla ọhazi ọ bụla mere na ntanetị na-anọrọ na otu ọwa (ntụgharị ahịa email) ka ụlọ ọrụ na-agbasi mbọ ike inweta azụmahịa "enweghị ntụpọ" mgbe otu ndị ahịa ahụ gafere ọwa.
Maka inwe olile anya ọ bụla iji nweta ọmarịcha omnichannel, ọ dị mkpa na agbanwere usoro iji nye otu echiche nke ọdịnaya na onyinye ngwaahịa gafee ọtụtụ ntụpọ nwere ike ịkọ akụkọ na-agbanwe agbanwe oge ọ bụla onye ahịa na-eji akara ahụ eme ihe.
Atụmatụ onwe onye
Abia na nhazi nke onwe, icheghari ahia ahia gi na uzo nile bu ihe mbu. Ndị na-ere ahịa kwesịrị ịchọpụta ụkpụrụ na ihe ndị dị mkpa nke ndị na-ege ha ntị ma gbanwee ọdịnaya na akụkọ akụkọ kwekọrọ na ya. Ihe ndị ahịa gị ji kpọrọ ihe kwesịrị imetụta ọdịnaya ị na-agbanye n'akụkụ ọwa ahịa niile.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ndị na-ege gị ntị lekwasịrị anya na-agbanwe agbanwe na ejiji, ọ dị mkpa na ọdịnaya azụmaahịa gị (site na nkọwa ngwaahịa gaa na onyonyo ndị dị adị) na-ekwusi ike njiri mara nke ngwaahịa a. Nke a nwekwara ike ịpụta na ị na-elekwasị anya na ụfọdụ ọwa karịa ndị ọzọ. Otu a nwere ike ịmasị ndị na-eme ihe mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, dịka ọmụmaatụ, yabụ ịchịkọta ọdịnaya ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi nwere ike inyere ụdị a aka ịzụlitekwu mmetụta nke mmetụta na ndị na-azụ ya.
Ọdịnihu nke ịkọ akụkọ dabere na ijikọta ọdịnaya na ọwa ahịa. Lọ ọrụ ndị na-akọ akụkọ ogologo oge nwere ike ime karịa naanị ịkwalite ịzụ ihe. Ha nwekwara ike imetụta echiche nke ọha na eze ma zụlite mmekọrịta site na-akpali mmụọ. Gwa ndị akụkọ ziri ezi site na iji usoro ọdịnaya eme ihe nwere ike ịbụ njikọ mmadụ ahụ dị oke mkpa n'etiti akara na ndị ahịa ya.
Kedu otu EnterWorks si enyere usoro ndị a aka
Banye na-enye ndị na-ere ahịa ahịa na ụdị aka ịchụpụ ahịa na oke oke na-akpali akpali, ahụmịhe dị iche iche site n'otu echiche nke ọdịnaya na ndị na-eweta ngwaahịa, ndị mmekọ, ndị ahịa, na ahịa.
Ihe ikpo okwu a na aru oru site na ichikota data data sitere na n’ime ya na onye ntinye ya (akwukwo osa, uzo mmeputara, nchekwa data ngwucha azu, onyonyo ma o bu vidiyo) ya na sistemu kpochapuru nke na ekpocha data nile. Nweta nchekwa data nnabata na-enyere aka ịmekọrịta ọdịnaya mekọrịta nke enwere ike iji gafee ọwa ahịa ahịa dijitalụ na anụ ahụ niile site na weebụsaịtị yana ngwa ngwa ekwentị na katalọgụ ma bipụta akwụkwọ ozi.
Karịsịa, usoro njikwa data EnterWorks gụnyere:
Nnabata data njikwa: Gbanwee ngalaba nke ngwaahịa, ndị ahịa, akara, ọnọdụ, na ngwaọrụ iji mee ka mkpọsa gị nyefee ọtụtụ atụmatụ.
Njikwa Ozi Ngwaahịa: Mepụta ma baa ọgaranya ngwaahịa data na ọdịnaya dịka ebe anụ ahụ na ntanetị aka dijitalụ maka nnyefe ọdịnaya na-enweghị ntụpọ.
Dynamic Data Modelling: Hazie ma ọ bụ gbatịa data na ụdị ọdịnaya iji chọpụta ọdịiche dị iche iche nke ngwaahịa dị ka ụdị azụmaahịa si abanye na ngalaba na ahịa ọhụrụ
Njikwa data na ọdịnaya bụ ihe kachasị mkpa na mmekọrịta mmekọrịta na ndị ahịa. Mana ime nke a n'ụzọ ziri ezi, azụmaahịa ga-etinye ego na ikpo okwu nwere oke egwu nke na-akwado data na ọdịnaya gafere ọtụtụ nyiwe iji metụta ndị na-ege ntị. Mgbe ụdị dị iche iche nwere ike ịkọ akụkọ ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe nke na-akpali ezi mmetụta n'etiti ndị ahịa, ha ga-ewulite njikọ miri emi karị ma na-azụlite iguzosi ike n'ihe ogologo oge.
Tags: content Marketingịme ngosi data di omimiọrụnchịkwa data njikwaatụmatụ onwe onyeọdịnaya ọdịnayapimnjikwa ozi banyere ngwaahịanjikọ aka